कमरेडको घमण्ड « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 10 February, 2019 3:14 pm
सिंहदरबारको आसपास बसेर चिया पिउदैँ थिए, त्यहीँबेला म नजिकै बसेको साथीले इसारा गर्दै भनिन्– उ आए कमरेड अगाडि पछाडि सेक्युरिटी राखेर । म चिया पिउन छाडेर उनको गाडीतिर नजर दौडाउन थालेँ । मैले एक नजर लगाउन्जेल त गाडी छेकिसकेको थियो। साथीले उनको राम्रा नराम्रा सबै पक्षको टिप्पणी गर्याे । उनको स्वभावकोसम्म मज्जाले विश्लेषण गर्याे । उनी छद्मभेषी छन् रे विचार एउटा बोक्छन् काम अर्को गर्छन् रे । साथीले यति विश्लेषण गरिसक्दा ती कमरेडलाई टिभीमा मात्रै होइन नजिकैबाट नियाल्ने भुत चढ्यो ।
त्यसपछि मैले उनलाई भने मलाई ती कमरेडलाइ नजिकैबाट नियाल्ने मन छ उपाय बताइदेउ न । उनले सहजै भनिन् – भोलि पनि कमरेड सिंहदरबार आउँछन् खोइ कुन मन्त्रालयमा पो कार्यक्रम छ रे मलाई जानकारी आएको छ । त्यसपछि म हसिँलो अनुहार बनाउदैँ त्यसोभए मलाई भोलि जसरी पनि सिंहदरबार जाने व्यवस्था मिलाइदेउ है । म भोलि कलेजबाट चाडैँ आउँछु नी । हेरौँ म प्रयास गर्छु उनको यस्ताे उत्तरपछि मैले भने प्रयास होइन भोलि जसरी पनि मिलाई देउ है। ल ल मेरो अंकल मन्त्रालयमा काम गर्नुहुन्छ म भन्दिछु पिर नगर । म ढुक्क हुँदै उनीसँग छुटेर आफ्नो बाटो तताए । त्यो रात एकदमै लामो लाग्योँ । भोलिपल्ट बिहान अरूदिनभन्दा चाडैँ उठेर कलेजतिर लागेेँ। सधै सर पसेपछि पुग्ने म त्यो दिन त सर आउनुभन्दा १५ मि पहिला पुगेँ । साथीभाइहरू जिस्काउदैँ थिए । के अचम्म ? यो घाम कताबाट लाग्योँ आदि आदि । म बेन्चमा बसेर मुसुमुस हासिरहेँ । केही प्रतिक्रिया दिइन ।
कोही उनलाई नमस्कार गर्दै थिए, पत्रकारहरू अर्काे साइडबाट खिच्दैँ थिए तर ती कमरेड कसैलाई नहेरी वायुवेगले भित्र पसे
कतिखेर बलराम सरको कक्षा सकिइएला र ती छद्मभेषी कमरेडलाइ नियाल्न पाइएला भनेर जतिबेला पनि नजर हातको घडीमा डुलाइरहेँ । १० बजे बलराम सरले छोड्नुभयो, अनि हतारमा क्लासबाट निस्किएर त्यही साथीलाई फोन गरि आफू आइरहेको जानकारी दिएँ । उनले सिंहदरबार छिर्न पासको व्यवस्था भइसकेको र मलाई कुरेर बसेको जानकारी दिइन, अनि म हतारमा पुगेँ सिंहदरबारको दक्षिण गेट । म पुग्ने बित्तिकै साथीले पास दिदैँ भनिन्- छिट्टै हिँड, कमरेड आउनेबेला भइसक्यो । अनि म पनि पहिलोपटक सिंहदरबार छिर्न पाएको सानका साथ छिरेँ, केहीबेर त ठूलै उपलब्धि हासिल गरेझैं महशुस गरेँ ।
अलिक माथि पुगेर साथीले कमरेड यहीँ आउँछन् बसौँ भन्यो र हामी चहुरतिर बस्यौँ । हामी बसेको १५ मिनेट पछि साइरनको आवाज सुनियो र साथीले भन्यो सवारी भो कमरेडको । म पल्लो कुनाबाट मुन्टो तानीतानी हेर्न थालेँ । कमरेड गाडीबाट निस्किए । वरिपरिका कसैलाई नहेरी भुँडी हल्लाउँदै मन्त्रालय प्रवेश गरे । यतिसम्म कि कोही व्यक्तिले उनलाई नमस्कार गर्दै थिए, पत्रकारहरू अर्काे साइडबाट खिच्दैँ थिए तर ती कमरेड कसैलाइ नहेरी वायुवेगले भित्र पसे । त्यसपछि साथी र म पनि कार्यक्रममा गयौं । नजिकैको मेचमा बसेर कमरेडलाइ नियाल्न थालेँ । कमरेड खुब सानका साथ उपरखुट्टी लाएर ड्यासमा विराजमान भएका थिए। आयोजकले प्रमुख अतिथिमा नाम बोलाउँदा समेत नउठी हात मात्रै हल्लाए । बिस्तारै कार्यक्रम शुरू भयो । अन्य निर्धारित वक्ताले वोलेपछि उनको पालो आयो । कमरेड बल्लबल्ल उठेर भुँडी हल्लाउँदै लागे मञ्चतिर । त्यसपछि शुरू गरे भाषण । मैैैैले उनकाे चर्तिकला पहिलोपटक प्रत्यक्ष देख्न पाएँँ । मौन भएर उनको सबै गतिविधि नियालिरहेँ । कमरेडको भाषण चरमोत्कर्षमा पुग्यो । अनेक झुठा सपना बाड्न थाले ।उनको भाषण सुन्दा कतिपय हास्न थाले । कतिपयले गाली गर्न । म भने चुप नै रहेँ । उनले आफ्ना पार्टीको नेता कार्यकर्तादेखि विपक्षी नेताहरूलाइ मज्जाले गाली गरेँ । अनि सम्बोधन सकेर कुर्सीमा बसेँ ।
त्यसपछि आयोजकले लगाएदिएको माला र खादा त्यही राखेर अर्काे कार्यक्रम छ, भन्दै दौडिए कमरेड । म भने एक कुनाबाट उनको स्वभाव नियालिरहेको थिए । मलाई पहिलोपटकको प्रत्यक्ष भेटमै उनको स्वभाव रत्तिभर मन परेन । उनको त्यो रूखो स्वर अनि रूखो व्यवहार देख्दा म चकित भएको थिए । मसँगै बस्ने साथीलाई भने यी कमरेड त कति रूखा हुन् ? उनले हास्दैँ मलाई जवाफ दिइन ।सर्वहाराको हकहितका लागि काम गर्छु भन्ने यिनै हुन् । उनको जवाफ सुन्दा मलाई विश्वास जागेन कि यिनी दुखी र गरिबको साहारा बन्नेछन् । त्यसपछिका पनि धेरै कार्यक्रममा पुगेँ तर उनीजस्तो रूखो र आफूलाइ सर्बैसर्वा ठान्ने कोही व्यक्ति भेटिन ।
यही महिनाको पहिलो साता पनि म संयोगवस उनको कार्यक्रममा पुगेँ । तर १ वर्षपछि पनि उनको स्वभाव, शब्दमा मिठास नभएको भाषण बदलिएनछ । अनि मनमनै सोचेँ कमरेड आम मानिसको अगाडि जतिसुकै दम्भ बोकेर हिडेँपनि प्रकृतिले तिमीलाई चिन्नेछैन । म विश्वस्त छु, एकदिन तिमीभन्दा प्रकृति बलियो बनेर आउँछ र तिम्रा घमण्डकाे पहाडलाई खरानी बनाइदिनेछ ।
नेपालमा हरेक दिन १६ जनाले गर्छन् आत्महत्या
पछिल्लो समय अख्तियारको फन्दामा परेका सरकारी बहालवालादेखि पूर्वकर्मचारी धमाधम आत्महत्या गरिरहेका छन् । पत्रकार शालिकराम
हाम्रो नेपाली समाज अतिथि देवो भव भनेर सोच्ने समाज हो ।
भगवानको लगौंटी खुस्किएपछि भक्तहरुको महाप्रलय…
जिन्दगी नै चुडाइँदियो भने हत्या हुँदैन महाप्रस्थान हुन्छ। यो भक्तहरूको शास्त्रमा लेखिएको हुन्छ।
हाम्रो संस्कृति तीज
सबै नेपाली आमा दिदीबहिनीहरुमा २०७६ सालको यो तीज पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।